Hay’ada Xuquuqda Aadanaha oo Amisom ka Dalbatay Inay si adag u Baaraan Tacadiyada Ay kagesteen Magaalada Marka – STAR FM SOMALIA
War qoraal ah oo kasoo baxay Xafiiska Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee (Human Rigths Watch), ayaa looga dalbaday ciidamada Amisom inay si adag u baaraan kiiska ku aadan Askar Amisom oo dad shacab ah oo aroos ku sugnaa ay ku laayeen Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose.
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha, waxa ay sheegtay dad goobjoogayaal ah inay u wariyeen in Askar ka tirsan ciidamada Amisom markii bam gacmeed lagu tuuray, kadib ay galeen dhowr xaafadood oo ku yaallo Xaafada Rusiya ee Magaalada Marka, kadibna Amisom ay toogasho kula dhaqaaqeen lix ruux oo ku sugnaa madal aroos 31-kii Bishii dhamaatay ee sanadkaan.
Mid ka mid ah guryaha xaafaddaasi oo ay qoyska Macalim Ciidey aroos ku lahaayeen, ayaa ciidammadu waxa ay kala saareen ragga iyo haweenka, waxaana ay halkaa ku toogteen lixda nin oo kala ahaa, afar isla dhalatay, aabbahood iyo adeerkood.
“Ciidammada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya waxaa haysta caqabado, balse taasi waxa ay muhiimad gaar ah u yeeleysaa ilaalinta xeerarka dagaalka.” Waxaa sidaa tiri Maria Burnett, oo ah cilmi baare sare oo Afrika uga shaqeysa Human Rights Watch.
“Toogashada dad ku sugan goob aroos, ama goob kaleba, iyagoo loo ciqaabayo weerarrada ay geystaan fallaagada, waxa ay mustaqbalka xaalka ku adkaynaysaa ciidammada Midowga Afrika.”Ayaa lagu yiri qoraalka Warka.
Hay’ada Xuquuqda Aadana ayaa ku sheegtay magacyada dadka Amisom ay ku dileen Magaalada Marka Macalim Ciidey Xeyle, Cumar Macalim Ciidey, Yuusuf Macalim Ciidey oo ku magac dheeraa “Bikole,” Xuseen Macalim Ciidey, Siid-Cali Macalim Ciidey iyo Aweys Xasan Xuseen oo ku magac dheeraa “Xamarow.”
“Amisom waa inay dhacdada Marka iyo kuwa meelaha kaleba, ku sameysaa baaritaan lagu kalsoonaan karo, oo u muujinaya Soomaalida in howlgalka nabad ilaalinta ay ka go’antahay la xisaabtanka ciidammada xadgudba,”ayay tiri Burnett.
“Baaritaanka waa inuu dhaafsiisnaadaa su’aallo weydiinta ciidammada Amisom , oo uu jiraa qaab lagu ilaalinayo marqaatiyaasha, si dhinacyada oo dhan loo dhagaysto.”